Arọ Truck mapụtara Parts, Bus Parts, Njem Car Popular Parts - ZONGCHI
Njem Car Popular Parts
Oil Akara Popular Parts
Shandong Zongchi Auto Parts Co., Ltd, emi odude ke Jinan, Shandong Province, na ebe omumu nke SINOTRUK, bụ a siri ike na ngwa ngwa na-emepe emepe ụlọ ọrụ. Ezi azụmahịa n'aka na elu management mode, anyị a guzosie ike magburu onwe ekwenye mmekọahụ nnọọ ọtụtụ anụ ụlọ na akpaaka Nsukka. Anyị na-e mgbe n'ịgbaso anyị azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "n'eziokwu management, àgwà ọrụ, ibe uru ma merie-mmeri" na-arapara n'ahụ nzube nke ahịa afọ ojuju, etozu ọrụ na ihe siri ike ọrụ.
F99660-ugboro abụọ H valvụ
DZ9112410018-n'iru tie ogwe aka Right
7DS180-1701115-mmepụta aro 5th gia
7DS180-1701112-mmepụta aro abụọ gia
Professional ụgbọala akụkụ emeputa
Nye batrị sales na mmezi oru nkwado
Tan Xuguang si Speech na Party C ...
On April 15, Tan Xuguang, Secretary na onyeisi oche nke CPC Committee of China Arọ Truck Group, onyeisi oche a nzukọ nke CPC Committee of China Arọ Truck Group (gbasaa). Ndị na-esonụ bụ zuru ederede nke okwu dere. Okwu na Party Committee (Mgbasawanye) Nzukọ nke China Arọ T ...
ọ dịghị. 1-123, ewu 21, Shandong arọ turck akụkụ lọjistik center, n'ebe ugwu sushan ụzọ na n'ebe ọdịda anyanwụ huanggang ụzọ, tianqiao district, Jinan, Shandong
Eq153 esi Oil Akara 80x135x12 / 26, Oil Akara Parts , Faw J6 azụ ụkwụ anọ Oil Akara 133.5x187x24 , Benz esi Oil Akara 85x105x13 / 14, Benz ụkwụ ihu Oil Akara 120x150x15, Str Crankshaft Front Oil Akara 95x115x12,